မင်းဘူးသတင်း | My Blog
မင်းဘူး -အထက(၁) ဆရာကန်တော့ပွဲ 2011 ဒီဇင်ဘာ (၃)ရက်
အဝေးရောက်( မင်းဘူးသား)သူငယ်ချင်းများ ခင်ဗျား ။
မင်းဘူး အ။ထ။က (၁)ဧ။် ဆရာကန်တော့ပွဲ ကျင်းပပါတော့မည်။
ကျင်းပမည့်နေ့ရက်က — 3.12.2011
မင်းဘူး -အထက(၁) ဆရာကန်တောါ့ပွဲ
ယခုနှစ်တွင် မင်းဘူးအထက (၁)တွင်တာဝန်ထန်းဆောင်ခဲ့သော ဆရာဆရာမများအား
၂၀၀၉။ ဒီဇင်ဘာ ၁၅ တွင်ဆရာကန်တော့ပွဲ ပြုလုပ်မည်ဖြစ်ပါသဖြင့် ရပ်ဝေးရပ်နီးမှ
သူငယ်ချင်းများ အလှူငွေများထည့်ဝင်နှိုင်ကြောင်း သိရှိရပါသည်။
M5.7 Magway Division Earthquake, 2009
22 Sept 2009 *local time*
E of Magiyon, Magway
Mw 5.7 (HRV), 5.6 (NEIC)
A moderate earthquake (M5.0-5.9 termed as “moderate”) struck the Upper Irrawady Valley in Magway division, Myanmar on 22 September 2009 at 01:08 IST or 02:38 BDST. The earthquake hadamagnitude of Mw=5.7 and caused some damage in Myanmar apart from being felt at many places north-east India and Bangladesh.
The earthquake was centred 3.7 kms E of Magyigon (Magway), Myanmar,
25.7 kms NNW of Minbu (Magway), Myanmar,
56.8 kms S of Chauk (Magway), Myanmar,
88.3 kms NW of Satthwa (Magway), Myanmar,
164 kms WNW of Pyinmana (Mandalay), Myanmar,
200 kms ENE of Sittwe (Rakhine), Myanmar,
300 kms SSE of Kaladan (Mizoram), India,
378 kms SE of Chittagong (Chittagong), Bangladesh,
586 kms SE of Dhaka (Dhaka), Bangladesh.
This earthquake was strongly felt in west-central Myanmar where it is believed to have damaged pagodas in Ohn Pwetaw and Yay Nan Chaung. Buildings were also damaged at Buthidaung in Rakhine division. The earthquake was felt in several towns in the region, including at Kyauk Phyu, Maungdaw, Pauk Taw, Ponna Kyaunt, Rathidaung and Sittwe. In Bangladesh, it was felt throughout the country including at Chittagong and Dhaka. In India, the earthquake was felt strongly in the Barak Valley in Assam as well as in parts of Mizoram. Elsewhere it was perceptible in other parts of Assam including Guwahati as well as in the states of Manipur and Nagaland. Tremors were also reported from as far as Kolkata in West Bengal.
Deep earthquakes along the Myanmar-India or Myanmar-Bangladesh borders tend to be felt over wide regions to the west of the epicentre. A Mw=7.0 earthquake on the Manipur-Myanmar border in 1954 was felt as far as Khajurao in Madhya Pradesh. Another Mb=6.5 earthquake on 8 July 1975 that occurred the immediate region of the latest earthquake on 22 September 2009 caused damage at Chauk and Pagan apart from being felt over 2,000 kilometres away in Delhi.
မင်းဘူး -အမ်း -စစ်တွေ ရထားလမ်းဖောက်လုပ်ခြင်း
စစ်တွေ-အမ်း- ပဒန်း- မင်းဘူးရထားလမ်းစီမံကိန်းမှာ နိုင်ငံတော်၏ အထူးစီမံကိန်းတွင် ပါဝင်သည့်လုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး အဆိုပါ လမ်းပိုင်းတလျှောက်တွင် တံတားကြီးငယ်ပေါင်း ၁၂၈၅ စင်းနှင့် ဘူတာ ၅၁ ရုံတို့ ပါဝင်မည်ဖြစ်ကြောင်း နိုင်ငံပိုင်သတင်းစာများတွင် ဖော်ပြချက်အရသိရသည်။
ဤရထားလမ်းမှာ ကြံခင်း-ပခက္ကူလမ်းအပိုင်းတွင်ရှိသည့် မကွေးတိုင်းမင်းဘူးမြို့ မှ ရခိုင်ပြည်နယ် စစ်တွေသို့ ဆက်သွယ်မည့် လမ်းဖြစ်ကာ အရှည်အားဖြင့် ၂၅၇ မိုင်ခန့် ရှိကြောင်း သိရသည်။ ဤလမ်းတွင် ဥမင်လိုဏ်ခေါင်းများ၊ တံတားကြီးများ ဖောက်လုပ် တည်ဆောက်ရမည့် အပြင်
ဆင်ခေါင်း-ပဒန်း-နတ်ရေကန်တောင်-အမ်း-မင်းပြား-မြောက်ဦး-ကျောက်တော်-ပုဏ္ဏားကျွန်းမြို့ များကိုဖြတ်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ဤရထားလမ်း စီမံကိန်းတွင် ပါဝင်သည့် စစ်တွေ-ပုဏ္ဏားကျွန်းအပိုင်းတွင် မြေသားလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်နေပြီဖြစ်ပြီး၊စစ်တွေ-မင်းပြား အပိုင်းအား ၂၀၀၉-၂၀၁၀ ခုနှစ်အတွင်း အပြီး တည်ဆောက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။ ဖောက်လုပ်ပြီးစီးပါက မင်းဘူးသားများ ရခိုင်ပြည်နယ်သို့ သွါးရောက် လည်ပါတ်နှိုင်တော့မည်ဖြစ်ကြောင်း သတင်ကောင်းပါးအပ်ပါသည်။
MRTV-4 ဆက်စပ်ရုပ်သံလိုင်း ၂၀ကျော်ကို ရန်ကုန်၊ စစ်ကိုင်း၊ မုံရွာ၊ ပြင်ဦးလွင်၊နေပြည်တော်- ပျဉ်းမနား၊မိတ္ထီလာ၊ပဲခူး၊
တောင်ငူ၊ ညောင်လေးပင်၊ ပြည်၊ မင်းလှ၊ ကျောင်းကုန်း၊ ပုသိမ်၊<မင်းဘူး၊ထားဝယ်၊ကျိုးတုံ၊တောင်ကြီး၊လားရှိုး၊
မော်လမြိုင်၊ မြဝတီ၊ စစ်တွေ၊ လွိုင်ကော်၊ မြစ်ကြီးနား၊ ဟားခါးဟူသည့်မြို့ ၂၄မြို့တွင်စက်ရုံများဖွင့်လှစ်ထုတ်
လွှင့်လျက်ရှိကြောင်း ၂၀၀၉ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၃ရက်နေ့ထုတ် The Voice ဂျာနယ်တွင်ဖော်ပြထားပါသည်။
မင်းဘူးခရိုင်အသင်း အမျိုးသား စာပေဆုရှင်များ ဂုဏ်ပြုပွဲ
မင်းဘူးခရိုင် (ရန်ကုန်)၏ နှစ်ပတ်လည် အစည်းအဝေးပွဲကို ရန်ကုန်မြို့၊ ဗဟန်း၊ ကြားတောရလမ်း၊ ကုန်သွယ်လယ်ယာ ဓမ္မာရုံ၌ ဇန်နဝါရီ (၁၈)ရက်၊
နံနက် (၈)နာရီက ကျင်းပရာ မင်းဘူးခရိုင် အတွင်းရှိ မင်းဘူး၊ စကု၊ လယ်ကိုင်း၊ ပွင့်ဖြူ၊ ကုန်ဇောင်း၊ စလင်း၊ ဆင်ဖြူ ကျွန်း၊ ငဖဲ၊ စေတုတ္တရာ မြို့နယ်များမှ အသင်းသူ အသင်းသားများ စုံညီစွာ တက်ရောက်ကြရာ အသင်းဥက္ကဋ္ဌ ဦးဝင်းဖေက သဘာပတိ အဖြစ် ဆောင်ရွက်ပြီး အခမ်းအနားမှူး ဦးစံလှက ဆောင်ရွက်သည်။ သဘာပတိ အသင်း ဥက္ကဋ္ဌက အဖွင့်အမှာစကား ပြောကြားရာ ယနေ့ နှစ်ပတ်လည် အစည်းအဝေးကြီးဟာ (၅၉)နှစ်မြောက် နှစ်ပတ်လည် ဖြစ်ကြောင်း၊ ယနေ့မှာ အမျိုးသား စာပေဆု နိုင်ငံတော်က ချီးမြှင့်သော ဘွဲ့ထူး၊ ဂုဏ်ထူးဆု၊ တက္ကသိုလ်ဝင် စာမေးပွဲ ဂုဏ်ထူးရ ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများကိုလည်း ဆုချီးမြှင့်သွားမှာ ဖြစ်ကြောင်း နှစ်စဉ် ကျင်းပနေကျ သက်ကြီး ပူဇော်ပွဲကိုလည်း ကျင်းပမည် ဖြစ်ကြောင်း၊ အလျဉ်းသင့်လို့ ပြောချင်တာကတော့ မင်းဘူးဓမ္မာရုံ ဆောက်ဖို့ ကြိုးစားနေကြောင်း၊ ဓမ္မာရုံကို ရွှေတိဂုံ ဘုရားလမ်း၊ တပ်မတော် ဓမ္မာရုံ အနီး တည်ဆောက်မည် ဖြစ်ပါ၍ အလှူရှင်များ ပါဝင် လှူဒါန်း ကြပါရန် တိုက်တွန်းလိုကြောင်း ပြောကြားသည်။ ဆက်လက်၍ (၂ဝဝ၇) ခုနှစ်၊ အမျိုးသားစာပေဆု၊ တစ်သက်တာ စာပေဆုရှင် ဆရာကြီး ဆင်ဖြူကျွန်း အောင်သိန်း ကိုယ်စား ဦးမောင်လှိုင် (အမျိုးသား စာပေရွေးချယ်ရေး အဖွဲ့ အတွင်းရေးမှူး)က လည်းကောင်း၊ ဝတ္ထုတိုပေါင်းချုပ် ဆုရှင် နေဝင်းမြင့်(ကုန်းဇောင်း)ကိုယ်စား အယ်ဒီတာချုပ် တက္ကသိုလ် ဆန်းတင့်နိုင်က လည်းကောင်း၊ ကဗျာ ပထမဆုရှင် အေးကြည်စိန် (စကု) ကိုယ်စား စာရေးဆရာကြီး ညိုအောင်က လည်းကောင်း၊ စာပဒေသာ ဆုရှင် တက္ကသိုလ် စိန်တင်(မင်းဘူး) စာပေဗိမာန် စာမူဆုစာပဒေသာ ပထမဆုရှင် အောင်စိုး တိရစ္ဆာန်ဆေးကု ဆရာဝန် (ပွင့်ဖြူ)နှင့် ဝတ္ထုရှည် ဒုတိယဆုရ မင်းဗေဒါ (ပွင့်ဖြူ) တို့အား ဂုဏ်ပြုဆုများ ချီးမြှင့်ကြသည်။ တက္ကသိုလ်ဝင်တန်း စာမေးပွဲ (၂ဝဝ၈) ခုနှစ်တွင် ဂုဏ်ထူးဖြင့် အောင်မြင်ကြသော အသင်းဝင်တို့၏ သားသမီးများအား ဆုများ ချီးမြှင့်ပြီး အသက်(၇၅)နှစ်ပြည့် အသင်းဝင် သက်ကြီး ပုဂ္ဂိုလ်များအား ပူဇော် ကန်တော့ပြီး အခမ်းအနားကို ရုပ်သိမ်းလိုက်သည်။
မင်းဘူးမြို့နှင့် အနီးတ၀ိုက် ရာသီဥတုအခြေအနေ	ဂျာနယ်	ဒီနေရာကတဆင့်တိုက်ရိုက်ဖတ်နှိင်အောင်လုပ်ပေးထားတာပါ။
ဒီကိုလိုက်ခဲ့လေ။	Blog at WordPress.com. • %d bloggers like this: